अवैध क्रसर बन्द हुन्छ : मेयर जिसी, यिनिहरु हुन् लगानीकर्ता – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७७ असार १ गते सोमबार १५:०४ मा प्रकाशित
पोखरा–१४ मा रहेको अवैध क्रसर बन्द हुने भएको छ । पोखरामा बन्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको अयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामाग्री पठाउने भन्दै २०७४ सालदेखी संचालनमा आएको क्रसर अन्तत बन्द हुने भएको छ । संचालन गर्दा देखी नै मापदण्ड विपरित रहेको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले ताण्डव न्यूजलाई बताए ।
‘अहिले पनि संचालनमा आएको भन्ने जानकारी पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कारवाही गरेर क्रसर नै बन्द गरिन्छ ।’ मेयर जिसीका अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुरुवाती दिनदेखी नै अवैध क्रसर भन्दै आएपनि अनुमती दिने र मसान्त लागेपछि सुटुक्क म्याद थप्ने गर्दथे । महानगरपालिकाले यस पटक के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
२०७४ माघ २४ गते वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले क्षेत्र अधिकारबाहिर गएर क्रसर उद्योग संचालन अनुमती दिएका थिए । राष्ट्रिय गौरवको अयोजना भन्दै वडाध्यक्षले अवैध क्रसर संचालन गर्न दिएका हुन् । त्यो बेला भिरालो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन खार्ने भन्दै वडाले महानगरलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसकै आधारमा महानगरकै तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायाण पौडेलले क्रसर संचालनका लागि हस्ताक्षर गरेरै स्विकृती दिएका हुन् । तर राजस्व भने डोजर चलाउने अनुमतीका लागि भन्दै १५ लाख ७९ हजार रुपैया तिराइएको थियो ।
अनुमती अनुसार २ महिनाका लागि मात्र डोजर चलाउने किटान गरिएको थियो । त्यसपछि एक बर्ष अवैध क्रसर संचालन गरियो । २०७५ असार मसान्तसम्म म्याद थपिदैन कि भनेको, त्यो बेला पनि उल्टो डोजर चलाउने सिफारिस भन्दै महानगरले ८० हजार रुपैँया राजेश्व लिएर सुटुक्क म्याद थप गर्यो ।
अहिले अवधि सकिएपनि शक्तिकै आडमा क्रसर संचालन गरिएको छ । त्यति मात्र होइन सार्वजनिक जग्गा विनाअनुमती खार्ने र सामाग्री निकाल्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।
को-को हुन लगानीकर्ता ?
ताण्डव न्यूजलाई प्राप्त जानकारी अनुसार क्रसरमा अहिलेसम्म धेरै व्यक्तिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी छ । त्यहाँ क्रसर राख्न मिलाउनकालागि केन्द्रदेखी, प्रदेश र स्थानीय दलाल लागि परेको स्रोतको भनाई छ । केहिले रकम लिएर नेतालाई बाड्ने काम गरेको स्रोतको भनाई छ । हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार निम्न व्यक्तिहरुको लागानी छ :
१. काठमाण्डौको कन्ट्याक प्रालिका ठेकेदार
२. रोमबहादुर कार्की
३. लिला लामिछाने
४. वडाध्यक्षका छोरा विकास कार्की
कानुनको धज्जी उडाउने अटेरी क्रसरमा प्रदेश सरकारले ताला लगायो